Muqdisho lagu soo gabagabeyeey shirkii Shirka Dastuurka ee arrimaha Xuquuqda Aadanaha – Radio Daljir
Muqdisho lagu soo gabagabeyeey shirkii Shirka Dastuurka ee arrimaha Xuquuqda Aadanaha
Noofember 27, 2018 4:59 g 0
Waxaa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirka Dastuurka ee arrimaha Xuquuqda Aadanaha, Lataliyaha arrimaha Warfaafinta iyo Xiriirka ee Wasaaradda Arrimaha Dastuurka Cabdicasiis Cabdi Xaaji Gobdoon ayaa warfidiyeenka u aqriyay baaqii laga soo saaray shirka oo u qornaa sida tan:-
Shirka Dastuurka ee arrimaha Xuquuqda Aadanaha oo ay soo wada qabanqaabiyeen Wasaaradda Arrimaha Dastuurka iyo Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqda Aadanaha ayaa waxaa ka soo qayb galay qeybaha kala duwan ee matalaya dadka Naafada ah, Haweenka, dadka Matalaada Siyaasadeed aan lahayn iyo Barakacayaasha.
Ka qayb galayaasha ayaa ka kala yimid dawlad goboleedyada Puntland, Jubaland, Koonfur Galbeed, Galmudug, Hirshabeele iyo Gobolka Banaadir waxayna ku kulmeen Hotel SYL taariikhda 25ka – 27ka Nofeember 2018, Muqdishu – Soomaaliya.
Shirka oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa isugu yimid dadkii loo baahnaa in wax laga weydiiyo lagana talo-geliyo arrimaha Xuquuqda Aadanaha.
• Iyadoo maanka lagu hayo muhiimadda ay leedahay xal u helidda arrimaha Xuquuqda Aadanaha;
• Iyadoo ujeeddadu tahay in si daacad ah la isula meel dhigayo wax ka qabashada arrimaha Xuquuqda Aadanaha;
• Iyadoo ay ka go’antahay labada Wasaaradood in ay tixgeliyaan talooyinka iyo natiijoyyinka kasoo baxay shirka;
• Iyadoo la tixgelinayo hiigsiga iyo dareenka dhammaan dadka Soomaaliyeed.
Shirka wuxuu diiradda saaray doodaha quseeya arrimaha hoos ku xusan:
1. Sugidda xuquuqda dadka naafada ah ee cutubka 2aad iyo dhaqan galinta Sharciyada Caalamiga ah ee dadka naafada ah;
2. Iswaafajinta tabashada Dadka aan matalaada siyaasadeed lahayn iyo Dastuurka;
3. Isu-Dheelitirka ragga iyo dumarka iyo matalaada siyaasadeed ee dumarka iyo Istiraatiijiyada lagu gaari karo dheelitir;
4. Sugidda xuquuqda dadka barakacayaasha; Shirka wuxuu isla aqoonsaday mabaadi’da soo socota:
5. Lahaanshaha Dastuurka:Dastuurku waa heshiis bulsho oo saldhig u ah habka dawladnimada Soomaaliya.
6. Xuquuq: Dastuurku waa kan ilaalinaya xuquuqda muwaadinka Soomaaliyeed astaynayana waajibaadka muwaadinka.
7. U-wada-dhammaansho: Dastuurku waa in uu noqdaa mid ay kawada qayb-qaataan bulshada Soomaaliyeed laguna ilaaliyo u-dhammaanshaha matalaadda siyaasadeed iyo tan maamul iyada oo si gaar ah loo tixgelinayo dadka xuquuqdoonka ah sida dadka Naafada ah, Haweenka, Carruurta, Barakacaayasha iyo dadka aan Matalaadda Siyaasadeed lahayn.
Haddaba, iyadoo la tixgelinayo muhiimadda iyo mabaadi’da kor ku xusan, waxaa shirka ka soo baxay taalooyinka iyo baaqa hoos ku xusan:
1. Shirka wuxuu ku amaanayaa dowladda Federaalka ah sida ay uga go’antahay ilaalinta Xuquuda Aadanaha, wuxuuna ku boorinayaa dowladda inay dardargeliso siyaasadaha iyo shuruucda la xiriira sugidda Xuquuqda iyo Karaamada Aadanaha sida ku xusan Qodobka Tobonaad ee Dastuurka KMG ah.
2. Shirku wuxuu ku boorinyaa Dowladda Federaalka inay dardargeliso dhameystirka Guddiga Xuquuqul Insaanka Qaranka, sida uu farayo Qodobka 111B ee Dastuurka KMG ah.
3. Shirku wuxuu ku baaqayaa in la dardargeliyo dhismaha Xafiiska Gardoonka Dadweynaha, Sida ku cad Qodobka 111J ee Dastuurka KMG ah, si xal loogu helo cabashooyoinka dadka aan Matalaada Siyaasadeed Lahayn, dadka Naafada ah, Haweenka, Barakacayaasha, iyo dhamaan dadka Xuquuqdoonka.
4. Shirku waxa uu ugu baaqayaa Hay’adaha u Xilsaaran Dib-u-eegista Dastuurka inay Dastuurka ku sugaan qodobo tilmaamaya xuquuqda dadka Naafada ah islamarkaana siinaya takoor quman (Positive Discrimination), sida ku xusan Qodobka 11aad Farqadiisa 4aad ee Dastuurka KMG ah.
5. Shirku waxa uu ugu baaqayaa Dowladda inay la timaado qorshayaal iyo siyaasado cad-cad oo fududeynaya in ay dadka naafada ah ay Hay’adaha Dowladda iyo kuwa gaarka ahba ka helaan xuquuqaha iyo adeegyada ay ula simanyihiin dadka kale sida shaqada, waxbarashada, caafimaadka iyo fududeeynta isu-socodka.
6. Shirku waxa uu ku baqayaa in la ciribtiro caadooyinka iyo dhaqamada ku saleysan hoos u dhigidda haweenka.
7. Shirku waxa uu ku baqayaa in Hay’adaha u Xilsaaran Dib-u-eegista Dastuurka ay Dastuurka ku sugaan qoondada haweenka ee boqolkiiba soddonka ee matalaadda siyaasadeed, mataladda xafiisyada loo tartamo iyo kuwa la isku magacaabo.
8. Shirku waxa uu ugu baaqayaa Barlamaanka JFS ansixinta Hindise Sharciyeedka Dambiyada Jinsiga kaasoo horyaalla Golaha Shacabka.
9. Shirku waxuu isla qaatay in shirkan oo kale uu noqdo mid sanadle ah si la isaga xog-wareysto waxa qabsoomay iyo waxa aan qabsoomin.
10. Shirku waxa uu Xukuumadda ugu baqayaa in ay sharci u badesho ayna dhaqangeliso Xeerkii Kampala ee Barakacayaasha oo ay saxiixday Dowladii Ku-meel-gaarka sanadkii 2011ka.
11. Shirku waxa uu ku bogaadinayaa Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka saxiixitaankii Sharciga Caalamiga ah ee Xuquuqda dadka Naafada ah, kaasoo Wasiiradu ku saxiiday magaalada New York, 2 Octoobar 2018; Shirku waxuu kaloo ku bogaadinayaa Wasaarrada dedaalkii dheeraa ay u gashay in Soomaaliya ay markii ugu horeysay xubin ka noqoto Golaha Xuquuqul Insaanka ee Qaramada Midoobay.
Shirka Dastuurka ee Arrimaha Xuquuqda Aadanaha wuxuu mahad ballaaran u jeedinayaa dhammaan ka qeybgalayaasha wuxuuna si gaar ah u bogaadinayaa wadashaqeynta labada Wasaaradood.
Ugu dambayn, dhammaan ka qeybgalayaasha Shirka Dastuurka ee Arrimaha Xuquuqda Aadanaha waxay xaqiijiyeen ka go’naashaha ka qayb qaadashada Dib-u-eegista Dastuurka iyo ku ilaalinta Dastuurka xuquuqda bulsho weynta Soomaaliyeed.
Maamulka Gobalka Nugaal oo digniin culus u diray musharraxiinta Puntland 2019 (Akhriso)